महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको चिठ्ठा ! Canada Nepal
महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको चिठ्ठा !
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएसँगै नेताहरु आन्तरिक र अन्तर दलबीच छलफलमा जुटिरहेका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी विपक्षी दलहरु छलफलमा जुटिरहे पनि बहुमत भने नपुुग्ने भएको छ ।
जनता समाजवाली पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहले नयाँ सरकार गठनमा सहयोग नगर्ने बताएपछि देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनमा बहुमत नपुग्ने भएको हो ।
तर, अब विस्तारै राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुने देखिन थालेको छ । विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन नसके फेरि पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै सरकारमा आउने भएपछि नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम समूह दबाबमा परेका छन् ।
यही दबाबले महन्थ समूहलाई पनि सरकार गठनमा सहभागी गराउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । जस कारण देउवा, प्रचण्ड, बाबुरामभन्दा पनि अरु नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन लागेको नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।
यसलाई पुष्टि हुने गरी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बुधबार सबै दलको सहभागिता तथा वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्रीबाहेकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रस्ताव महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको बुुझिएको छ ।
यसअघि पनि महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दलहरु सहमत भए ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सजपाका नेताहरु तयार रहेको चर्चा चलेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले संसदमा विश्वासको मत मागेपछि अहिलेको राजनीतिक अवस्था सृजना भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ । यही बेला महन्थलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज विस्तार बढ्दै गएको देखिन्छ ।
नयाँ सरकार नबनाएर फेरि ओली नै सरकारमा आउने र मुलुक चुनावमा जाने नेताहरुको आशंका छ । यसर्थ महन्थलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना धेरै रहेको नेताहरु बताउन थालेका छन् ।
बैशाख २९, २०७८ बुधवार १२:१४:१५ बजे : प्रकाशित